Kudzidza manejimendi uchishandisa wega-inomiririra yemahara uye yakavhurika sosi software | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura, muverengi akatibvunza zvinotevera:
Chinhu chepedyo kwazvo chatinowana, Aya ndiwo mafomu anogona kuiswa pane yewebhu webhu uye kuwanikwa kubva kune yemukati network.
Rangarira kuti kana izvo zvikumbiro zvisina kunyanya kukwirira, sevha inogona kumhanya pane yakajairwa komputa uchishandisa desktop dhizaini. Imwe nzira yakanaka yekugadzira iyo XAMPP.
XAMPP iri mugove kubva sApache webhu server, MariaDB dhatabhesi injini, uye PHP uye Perl programming mitauro. Izvi zvakaringana kuisa mazhinji ezvirongwa zvakagadzirirwa kushanda online.
1 Kudzidza manejimendi uchishandisa software. Ndeapi maitiro
1.1 Kudzidza Management Software Zvimiro
2 Kudzidza manejimendi software. Mamwe akavhurwa sosi zvirongwa
3 Kubatana maturusi kuburikidza nesoftware
3.1 Kubatana Kuvhura Sosi Kubatana Software
3.2 Tiki Vhura Sosi Kubatana Software
Kudzidza manejimendi uchishandisa software. Ndeapi maitiro
Iyo yekudzidzira manejimendi system (LMS) uyeIyo software yakagadzirirwa kushanda kubva kune webhu server. Chinangwa chayo ndechekupa, kugovera uye kudzora asiri-kumeso-kumeso mabasa ekudzidzisa. Yakagadzirirwa kuitira kuti vatori vechikamu varege kupinda muchirongwa panguva imwe chete.
Kudzidza Management Software Zvimiro
Sezvishoma, rudzi urwu rwechirongwa runofanira kubvumira zvinotevera:
Kugadzira uye kugovera zviwanikwa, zvishandiso uye zviitiko zvekudzidzisa,
Manage mudzidzisi uye mudzidzi kuwana Manage kuwana.
Kudzora, kuongorora uye kuongorora kwemaitiro ekudzidza.
Kugadzwa kwenzira dzekutaurirana dzakadai semaforamu ehurukuro, musangano wevhidhiyo uye hurukuro.
Kudzidza manejimendi software. Mamwe akavhurwa sosi zvirongwa
Kunge mamwe maneja ezvinyorwa zvezvinangwa zvakasiyana, A-Mudzidzisi inoshandisa module system iyo inobvumidza kuwedzera kwayo maitiro. Iwo manejimendi evadzidzi uye makosi anoitwa kubva pane iri nyore kushandisa interface.
Kugadzira, kuwedzera uye kudzima kwemakosi
Manejimendi evadzidzi uye emudzidzisi profiles.
Kugadzirwa kwemablog maboka.
Kutungamira kwemafaira uye zvemultimedia zvemukati.
FAQ peji anovaka.
Iyi chikuva inosanganisa hombe seti yematuru ekudyidzana kubatsira varairidzi uye vadzidzisi kubata chaiwo makosi.
Kugadzira, kugadzirisa uye kudzima kosi.
Kosi yezvinhu maneja.
Ruzivo rwekuongorora system.
Kutsigira kwemazhinji eboka maturusi maturusi; maforamu, mablog, bulletin board, chat, mapoka emapurojekiti, podcast, nezvimwe.
Dhizaini inochinjika kune iyo kifaa.
Kubatana maturusi kuburikidza nesoftware
Zvichida izvozvo kudzidza manejimendi masisitimu anodarika zvinodiwa nemuverengi wedu. Naizvozvo, Takasarudza kutarisa kumwe kunhu. Mune maturusi anobvumidza kubatana kure kuburikidza nesoftware.
Kunyange zvakadaro hazvina kuitirwa kudzidziswa kwakarongeka pamhepo (usasanganise mamoduleti ekunyoresa kana masystem ekuongorora) kana vachishumira kutarisira mapurojekiti.
Kubatana Kuvhura Sosi Kubatana Software
Es chinhu yeiyo manejimendi manejimendi iyo inokutendera iwe kuti uteedzere mapurojekiti, matanho, kuita-zvinyorwa uye mabasa uchishandisa browser. Yakagadzirirwa tumira nyevero dzeemail kana chimwe chinhu chaitwa, kana mumwe munhu akaisa faira, kana kana mumwe munhu akapotsa nguva yakatarwa. Kubvumirana pamwe nemashandisirwo mazhinji ekarenda zvinogoneka. Iyo zvakare ine basa manejimendi manejimendi.
Tiki Vhura Sosi Kubatana Software
Icho chiri pamusoro chinhu vhura sosi yekubatana software ne maficha senge wiki, mablog, maforamu, karenda, mifananidzo yemifananidzo, uye mapoll. Izvo zvakanaka se chikuva cheiyo intranet yakanangiswa pane chimwe chirongwa.
Wiki: Iyo seti yemapeji ewebhu ayo chero munhu (ane mvumo) anogona kugadzirisa nekukurumidza uye nyore pasina kudikanwa kwekukodha.
Fmafomu ekuunganidza yeruzivo. Mishumo chizvarwa.
Blog Kugadzirwa kwemazhinji mablogiki ane nyore kushandisa interface.
Foramu: Kugadzirwa kwemaforamu mazhinji nesangano nemisoro uye neemail ziviso.
Zviitiko karenda: Tiki inotsigira makarenda akawanda, kusanganisira ako pachako (mushandisi-akasarudzika) makarenda. Kuziviswa kwezviitiko zve-pop-up uye kutumira kunze kune iCal fomati
Faira Garari: Galleries inogona kushandiswa kuchengetedza mifananidzo, zvinyorwa kana chero imwe faira yakaiswa.
Ongororo, mibvunzo uye mapepa: Zvese zviri nyore, yakawanda sarudzo kana yemahara mhinduro mibvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kudzidza manejimendi uchishandisa wega-inomiririra yemahara uye yakavhurika sosi software
Manheru akanaka, iwe unogona here kutumira posvo nezve yemahara yekuvandudza nzira kune Teamviewer, ini ndaedza apache guacamole asi iwe unofanirwa kumisikidza maseturu ekomputa imwe neimwe yaunoda kuwana kure.
Ehe, ndinokutendai zvikuru nezano.
Ini ndaizowedzera t-wiki nemapulagi ayo ese
Iyo inoshandiswa nehukuru hwenyika zhinji
uye kunyangwe yayo Yemahara uye Yakavhurika Sosi yemunharaunda edition ine simba kwazvo.
Kana makambani akaita seSAP kana Motorola achivimba nawo, fungidzira kuti zvakanaka sei.